बिहे पछि एउटा नयाँ जिन्दगी सुरु हुन्छ ।विशेष गरि बिहे पछि महिलाको जिन्दगीमा धेरै परिवर्तन आउँछ ।उनीहरुको बोली चाली देखि हरेक कुरामा परिवर्तन आउँछ। पुरै जिन्दगी बदलिन्छ र यो समायोजन गर्न अलि समय पनि लाग्छ। साथै उनीहरुको शरीरमा पनि परिवर्तन देखिन्छ । आखिर बिहेपछी किन यस्तो हुन्छ त? उनीहरुको नितम्ब किन फुल्छ ? पुरुषमा ...
होटलमा यौन सम्पर्क गर्दा गर्दे जोडीको मुत्यु
थाइल्याण्डमा एक पर्यटकको सेक्स गर्ने क्रममा ज्यान गएको खबर एजेन्सीले जनाएका छन् । शायद उनी सेक्सलाई युद्धका रुपमा लिइरहेका थिए । २२ वर्षीय एक बेश्या युवती सँग उनी सेक्स गरिरहेका थिए । सेक्सकै क्रममा आवेसमा आएर उनले आफ्नो टाउको ढोकामा जोरले ठोके ।जसको कारण टाउकोमा गहिरो चोट लाग्यो मृत्यु भएको बताईएको छ ।यी विदेशी पुरुषक...